आमाको सपना पूरा गर्न साउदी गएको छोरा २२ दिन नहुदै यसरि निधन भयपछि… ! « Online Tv Nepal
आमाको सपना पूरा गर्न साउदी गएको छोरा २२ दिन नहुदै यसरि निधन भयपछि… !
Published : 30 March, 2020 7:08 pm
गएको पुस १ गते कान्छो छोरा मोहन वैदेशिक रोजगारको लागि साउदी अरबतिर लागेका थिए भने उनका दाई कृष्णबहादुर जर्घा अर्को दिन पुस २ गते मलेसियातर्फ उडेका थिए। संयोग दुइ भार्ईको वैदेशिक यात्रा एक दिनको फरकमा भएको थियो। आफु सुखी र आमालाई खुसी बनाउने मनभरी सपना बोकेर साउदी गएका मोहनको सपना सपनामै सिमित हुन पुग्यो। उनले बुनेको सपनाको महल साउदी अरबको खाडीमा ढलेको छ। २२ वर्षीय मोहनको साउदी अरब पुगेको २२ दिनमै मृ’त्यु भएको हो। ड्युटी सकेर कोठामा फर्कदै गर्दा सवारी दु’र्घटनामा परेर उनको मृ’त्यु भएको दाजु कृष्णले बताए। साइकलमा आउदै गरेका उनलाई एउटा कारले ठ’क्कर दिएको थियो।
साउदीको रियादमा गएको पुस २३ गते मृ’त्यु भएका मोहनको अहिलेसम्म श’व नेपालमा आउन सकिरहेको छैन्। ‘कान्छो छोरा मोहनले विदेश हिड्ने बेलामा भनेको थियो ‘म पैसा कमाएर आउछु र पहिले आमा तिमी बस्ने घर बनाउछु’ दुवै आँखाको गहभरी टिलपिल आँशु लिदै नरमतिले भनिन् गएको एक महिना नपुग्दै मृ’त्यु भएको खबरले म बाँचुलाजस्तो लागेको छैन्। एक्कासी भक्कानिएकी उनी राम्रोसँग बोल्न समेत सकिनन्। ‘घरमा आमा बे’हाल अवस्थामा हुनुहुन्छ’ उनले भने ‘भाइको श’व छिटो घरमा ल्याउन पाए हुन्थ्यो। आफुले चिनेको ठुला मान्छे कोही नभएकोले भाइको श’व नेपाल कहिले आउने हो ? भन्नेमा अन्योलता छाएको कृष्णले बताए। उनी ३६ दिनको छुट्टी लिएर आ’कस्मिक घर आएका हुन्। भा’वविह्वल अवस्थामा रहेकी आमालाई सम्हाल्दानै उनको दिनहरु बितिरहेको छ। भाइको श’व झिकाउने प्रक्रियाबारे उनी अ’नविज्ञ छन्। भाइलाई पठाएको म्यानपावरले दिएको आश्वासनमा आफुहरुले पर्खि रहेको उनले बताए। मोहन काठमाडौँको सिनामंगलस्थित फजल इन्टरनेशनल प्रालिबाट साउदी अरबको रियाद पुगेका थिए।श’व नेपाल ल्याउने प्रक्रिया चलिरहेको आश्वासन प्रालिबाट पाएको कृष्णले बताए। यद्यपि १२ दिन पुग्दा समेत श’व आउने सुरसार नदेख्दा कृष्णको परिवारमा झनै निराशा थपिएको छ। उनले भाइको श’व जतिसक्दो छिटो नेपाल ल्याइलिन नेपाल सरकारसँग आग्रह गरे। श’व नेपाल ल्याउने प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको प्रालिका अध्यक्ष लक्षिराम ढुंगानाले बताए। श’व कहिलेसम्म नेपाल आउछ भन्नेमा उनी पनि अ’न्योलमा छन्। मोहनको मृ’त्युपश्चात परिवारले पाउने राहतको बारेपनि अहिलेसम्म कुनै प्रक्रिया अगाडि नबढेको स्थानीय बीरबहादुर रानाले बताए।
प्रदेश १ को लोकसेवा आयोगको अध्यक्षमा भट्टराई सिफारिस ६ माघ, विराटनगर । प्रदेश १ को लोकसेवा आयोगको अध्यक्षमा उत्तम भट्टराईको नाम सिफारिस भएको छ । प्रदेश सरकार विस्तार गरेको २४ घण्टा बित्न नपाउँदै मुख्यमन्त्री शेरधन राईको संयोजकत्वमा रहेको सिफारिस समितिले अध्यक्षमा भट्टराईलाई सिफारिस गरेको हो । सोमबार बसेको समितिको बैठकले समितिको सदस्यमा पूर्वउपसचिव टिकादत्त राई र महिलातर्फबाट सजना दाहाल (सीमा आभास)को नाम सिफारिस गरेको छ । ६१ वर्षीय भट्टराई नेपाल सरकारका पूर्व कृषि सचिव हुन् । उनले २०७३ सालमा अवकास पाएका थिए । ५७ वर्षीय राई भने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा कार्यरत थिए । सदस्यमा नियुक्ति हुने भएपछि उनले आइतबार नै राजीनामा दिएका थिए । नेपाली कांग्रेसको कोटाबाट सिफारिस भएकी दाहाल साहित्यकार हुन् । उनी प्राध्यापन पेसामा आवद्ध छन् । आयोगको पदाधिकारी बन्न मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरेको, नियुक्तिको बेला कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको हुनुपर्ने प्रावधान छ । लोकसेवा पदाधिकारीको कार्यकाल ६ वर्षको हुनेछ । उमेरहदका कारण अध्यक्ष भट्टराईले ४ वर्षमात्र काम गर्न पाउनेछन् । टिकादत्त राई कर्मचारी समायोजनमा प्रदेश रोज्ने उपसचिव हुन् । उनीसँगै भीम गौतमले कर्मचारी समायोजनका क्रममा प्रदेश एक रोजेका थिए । आयोगका पदाधिकारीलाई प्रदेश प्रमुखले नियुक्त गरेपछि उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशले सपथ ग्रहण गराउनुपर्ने प्रावधान छ । आयोगका पदाधिकारीलाई प्रदेश प्रमुखले नियुक्त गरेपछि उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशले सपथ ग्रहण गराउनुपर्ने प्रावधान छ ।